मलेशियामा ११ पुरुषको लागि १० महिला मात्रै ! - jagritikhabar.com
मलेशियामा ११ पुरुषको लागि १० महिला मात्रै !
मलेसियामा पछिल्लो पुरुष जनसंख्या महिला भन्दा बढी छ, जुन कूल ३२.४ मिलियन जनसंख्याको ५२.३ प्रतिशत हो जुन जनसंख्या र आवास जनगणना २०२०
को तथ्याङ्क विभाग मलेसिया (DOSM) द्वारा जारी गरिएको प्रमुख निष्कर्षमा आधारित छ। प्रधानमन्त्री दातुक सेरी इस्माइल साबरी याकोबले कुल महिला जनसंख्या ४७.७ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
“यसले जनसङ्ख्याको लिङ्ग अनुपात १०० महिलाको तुलनामा ११० पुरुष रहेको छ। “जनगणनाको निष्कर्षले यो पनि देखाउँछ कि पुरुष भन्दा बढी महिला भएको राज्य पुत्र’जयाको संघीय क्षेत्र हो, जहाँ १०० महिलाहरू ९६ पुरुषको बराबर छन्,” उनले भने।
सोमबार यहाँको कुलपति हल, व्यवस्थापन तथा विज्ञान विश्वविद्यालय (एमएसयू)मा ‘योर डाटा इज द फ्यु’चर अफ द नेशन’ विषयको मलेशिया जनगणना २०२० की मुख्य निष्कर्ष प्रतिवेदनको लोकार्पण समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मलेसियाको रोजगारी खुल्यो, कहिले देखि जान पाउने ?
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारी कार्यान्यवन हुने भएको छ ।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता (एमओयु) अनुसार अब नेपाली युवाहरु पुनः वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जान पाउने भएका हुन् ।
अघिल्लो वर्ष जेठ २ गतेदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी खुलाउन मलेसियन उच्च अधिकारीसहित नेपालका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा परराष्ट्र र कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको टोली गत सोमबार मलेसिया गएको थियो ।
मलेसियाको क्वालम्पुरमा ३ दिनदेखि चलेको दुबै देशको प्राविधिक कमिटीको बैठकमा नयाँ समझदारीमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको हो । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच गत वर्षको कात्तिक १२ गते श्रम सम्झौता भएको थियो ।
‘नया समझदारी अनुसार कामदार लैजाने विषयमा मलेसिया सरकारसँग सहमति भएको छ’ नेपालका तर्फबाट बैठकको प्रतिनिधि श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले बताए ।
तीन दिनसम्म चलेको बैठक बिहिबार टुंगो लागेको हो । नयाँ श्रम सम्झौता प्रभावकारी भएमा एक साताभित्रमा नै एमओयुको नयाँ प्रावधानअनुसार नेपालीहरु मलेसिया वैदेशीक रोजगारीमा जान पाउनेछन् ।
रोजगारीका लागि मलोसिया जाने नेपाली कामदारले कुनैपनि शुल्क तिर्नु पर्दैन् । सम्पूर्ण लागत मलेसिया सरकारले नै बेहोर्ने छ ।
मलेसियन सरकारसँग नेपालले १ वर्ष अगाडि नै श्रम सम्झौता गरिसकेको भएता पनि स्वास्थ्य परीक्षणको विषयले गर्दा रोजगारीमा युवाहरु मलेसिया जान पाएका थिएनन् ।
मलेसियन सरकारले नेपालबाट रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गरी मलेसिया पठाउने संस्थाहरुको मापदण्ड पठाए पश्चात यो सहज भएको हो ।
हाल मलेसियन सरकाररले मापदण्ड तोकेर १ सय २२ वटा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको नामावली पठाएको छ ।